Posted by မီးမီးငယ် at 5:34 PM
Anonymous July 14, 2013 9:08 AM
Ma Mee Nage !!! How are you?I I like Greek Food , Mostly Greek Coffee.
မီးမီးငယ် July 14, 2013 3:41 PM
Anonymous July 14, 2013 12:29 PM
အိမ်နားကဈေးမှာတော့တရုတ်အစားအစာဖရက်ရ်ှကြော်လှော်ရောင်းတဲ့ဆုိုင်ရှီတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကျတော့လည်းဝယ်မစားချင်ဘူး။ ကုိုယ်လုပ်တတ်တာတွေချည့်ကို။ ကော်ပြန့် တုို့ ဘာတို့ လိုမျိုးတွေလေ။
တခါနဲနဲလှမ်းတဲ့ဈေးကိုသွားတုန်းကတော့ရှားရှားပါးပါးမုန်ညင်းဖူးတွေတွေ့ လို့ ဝယ်လာခဲ့တယ်။
အစည်းခပ်သေးသေးကို ၄ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့ရတယ်။ နေရာဟောင်းမှာဆုို ဘာဝယ်ဝယ် ၁ကျပ်ဘဲ။
နေရာဟောင်းက ဈေးကိုရုိုက်ထားတာအများကြီးဘဲ။ တော်တော်အားမှတင်ဘို့ ကြိုးစားလိုက်အုန်းမယ်။
ကိုရီးယားမားကက်ကြီးကမိုက်တယ်နော်။ သွားချင်တာ။ ကုိုယ်ဆုိုကိုရီးယားဆုိုင်က ပဲပုတ်စေ့ရယ်၊ မုန်လာဥအရွက်ပါတာရယ်၊ မက်ကရယ်ငါးပိကောင်ရယ်၊ ငါးခြောက်သေးသေးလေးတွေရယ်၊ ဍရင်ကောက်ဖရုိုးဇန်းရယ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် ရယ်၊ နှမ်းရယ်၊ ဆီးဝိဒ်ရယ်၊ တင်ပူရာမှုန့် ရယ်ဝယ်လေ့ရှိတယ်။ တချို့ ဟာတွေဝယ်လာရင်ကုန်အောင်မစားဖြစ်ပဲပစ်လုိုက်ရတာများတယ်။
ပဲပုတ်စေ့ချက်စားချင်ရင် ကိုရီးယားဆုိုင်သွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မုန်လာဥအရွက်ပါတာပါဝယ်လာပြီးချက်စားဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ်ငတ်နေပြီ။ မနည်းဖန်တီး(မကောင်းမွန်ဝင်းပြောသလို) အစားထုိုးချက်စားနေရတယ်။ သနားစရာ။း)
မီးမီးငယ် July 14, 2013 3:54 PM
ကျမတို့ ဖက်မှာလည်း ဘိုလယ်သမားများနေတယ်..။
ဒါကြောင့် ကကြီးဆိုင်နဲ့ ဘဲညားနေရတယ်။
တံခါးလာခေါက်ရင်လည်း ဟစိဟစိရော..နဲ့ ၊
သူတို့ ကျောင်းမှာဗလန်တီယာ လုပ်ဖို့ လာခေါ်တယ်..:P
ကိုက်လံရွှက်နဲ့ ငါးပိကောင်ကြော်စားမလို့ ၊
သနားပါတယ် မလည်းအရင်ကလိုမြန်မာဟင်းနဲ့ အူမစိုတော့ဘူးပေါ့ :))
Anonymous July 14, 2013 4:16 PM
ကုိုယ်ပြောတဲ့ပဲပုတ်စေ့ကလုံးဝအချိုမပါဘူး။ ဘူးနဲ့ ဟာကချိုတယ်။ ဘူးအစိမ်းနဲ့ ပဲပုတ်စေ့ဝယ်တာချိုချိုကြီး။ တခါဘဲစမ်းစားဖြစ်တယ်။
ကုိုယ်ပြောတဲ့ပဲပုတ်စေ့ကမြန်မာပြည်ရန်ကုန်ကထက်ကောင်းတယ်။ ရှမ်းပြည်တုို့ အညာတို့ ကလိုမျိုး။
plastic wrap နဲ့ အိမ်လုပ်လိုမျိုးဘဲပြားပြားဝုိုင်းဝိုင်းလေးထုတ်ထားတာ။ လက်တ၀ါးမရှိတရှိလောက်ရှိမယ်။ မှန်ဖရီဇာတုို့ မုန့် တုို့ ပန်ကိတ်တုို့ လိုမျိုးတွေနားမှာထားတတ်တယ်။ မီးမီးကြိုက်မယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်လည်းအချိုဘူးမစားဖြစ်လို့ ဝဲလိုက်ရတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက ပလတ်စတစ်ဘူး အစိမ်းတုို့ အနီတုို့ နဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ် brand name တုို့ ingredients တုို့ ဘာညာ စာတွေတံဆိပ်တွေပါတယ်။ ကုိုယ်ပြောတဲ့ပဲပုတ်စေ့က ဘာတံဆိပ်မှမပါဘူး။
ကုိုယ်ပဲပုတ်စေ့ဟင်းစားချင်ရင် ဂျပန်လုပ် Ngatho ဘူးသေးသေးလေး ၃ဘူးတွဲလေး ရယ် အဲဒီကိုရီးယားထုတ်ရယ်ဝယ်စားတယ်။ ဂျပန်ဘူးက အစေးတွေပါတယ်။ ဂျပန်အမေရိကန်ကပြားသူငယ်ချင်းကစားလို့ သိသွားတာ။
ထုိုင်းဆုိုင်လည်းရှာသေးတယ်။ Restaurant ဘဲရှိတယ်။ မမိုက်ဘူးကွာ။
မီးမီးငယ် July 14, 2013 10:23 PM
တဆိုင်နဲ့ တဆိုင်အရသာကွဲတယ်နဲ့ တူတယ်။
အရင်က H&Y ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာဝယ်တယ်(Longisland)မှာနေတုံးက။
အဲဒါစားကောင်းပြီးခုဝယ်တာချိုတိုတိုနဲ့ ခေါက်ဆိန့် ၊
ဟော်လန်မှာကြတော့ အင်ဒိုနီးရှားတွေရဲ့ ပဲပုပ်က၊
အနောက်ဖက်ကမ်းမှာ ထိုင်းမားကက်ပေါတယ်လို့ ကြားတာဘဲ၊
Anonymous July 14, 2013 4:24 PM
Sorry, Natto..လုို့ ပေါင်းတယ်ထင်တယ်။ ဂျပန်ပဲပုတ်ခပ်ချွဲချွဲကို။း)
မီးမီးငယ် July 14, 2013 10:26 PM
Ngatho လို့ လုပ်လိုက်တယ်လေ..
Hi Ma Mie Mie,
I just across your post and I love to read it. I have spentafew days to finish your 2010 and 2011 posts. I will continue reading your 2012 posts. In the mean time I just want to say thanks for sharing interesting topics and photos.
မီးမီးငယ် July 15, 2013 2:51 PM
Really I start to write it just for kill my spare time.
First I don't know what to write,so only post the photo.
Later try to use Myanmar font and write it.
Where we visited,what we ate then I try to tell about my self,because I know very well is only myself. :)))
Now I try to write about9years experience in Chaing Mai.
Thanks again for your kindness comment.
Anonymous July 19, 2013 5:42 AM
မီးမီးငယ် July 19, 2013 8:51 AM
ငါ့ညီမလေးနဲ့ တော့တွေ့ ချင်တာပေါ့လို့ ..
San Htun July 19, 2013 10:25 AM
သာမီးလည်း အဲဒီကိုရီယားဆိုင်နဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတယ်...ဂျာမဏီက အကြောင်းတွေ ဖောက်သည်ချဦးလေ..ဗဟုသုတ ရတာပေါ့...
မီးမီးငယ် July 20, 2013 6:36 PM